Franck Kessie oo iska diiday inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxda AC Milan – Gool FM
Franck Kessie oo iska diiday inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxda AC Milan
Ahmed Nur September 9, 2021
(Milan) 09 Sebt 2021. Franck Kessie ayaa la soo warinayaa inuu iska diiday inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxda AC Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga.
Tuttosport ayaa warinaysa in Franck Kessie uu iska diiday heshiis kordhintii ugu dambeysay ee ay Kooxda kubadda cagta AC Milan u soo bandhigtay.
24-sano jirkaan khadka dhexe ka dheela ayaa qandaraaskiisa haatan waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan, kooxda Rossoneri ayaana doonaysa inay heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal-mariso si ay sanado kale u sii haysato.
Laakiin, kaddib markii uu diiday Franck Kessie heshiis kordhin uu sanadkii ku qaadan lahaa 6.5 milyan oo euro, Kooxda AC Milan ayaa laga yaabaa inay iska iibiso Kessie suuqa kala iibsiga xiddigaha bisha Janaayo.
Kooxda PSG oo iska diiday dalab ay Barcelona ka soo gudbisay Neymar Jr xagaagan… (Imise Milyan ayuu ku kacayey?)
Kooxda Chelsea oo beddelka Jorginho ka dhex aragta horyaalka Talyaaniga… (Xilli xiddiga reer Talyaani uu ku sii jeedo…)